❤️ Paikady sy toro-hevitra momba ny fitomboana Instagram tsara indrindra 2021 - Winches Club
Torohevitra sy paikady momba ny fitomboana Instagram tsara indrindra 2021
Instagram dia iray amin'ireo sehatra media sosialy malaza indrindra amin'ny tsena ankehitriny. Ny hevitra momba ny firotsahana dia karazana vola amin'ny media sosialy. Ny fomba fitomboan'ny Instagram dia hanampy anao hanatsara ny fanatrehanao an-tserasera, ary ny firotsahana bebe kokoa dia hahazo tombony amin'ny mombamomba anao Instagram, miampy anao hahazo mpanaraka ao amin'ny Instagram.
koa, mifaninana amin'ny fandraisana anjara bebe kokoa ny orinasa, satria mihamaro ny olona mifandray amin'ny votoaty, vao mainka mety haseho amin'ny mpampiasa hafa izany.
afa-tsy, Ny fahatakarana ny tontolon'ny varotra nomerika no dingana voalohany amin'ny fahatakarana ny zavatra any ivelany sy ny fomba idiran'ny olona amin'izany. Ny fahafantaranao ny fironana sy ny tontolon'ny media sosialy ankehitriny dia afaka manampy anao hamantatra ny fomba hampitomboana ny Instagram anao..
Torohevitra sy paikady momba ny fitomboana Instagram tsara indrindra
Ireto misy fomba voaporofo hampitomboana ny fitomboan'ny Instagram miaraka amin'ireo mpanjifa mety sy hampitombo ny orinasanao amin'ny 2021.
Raha mitantana orinasa ianao na manana marika manokana, tokony hampiasa kaonty Instagram matihanina ianao. Amin'izao fomba izao, manana fifehezana bebe kokoa amin'ny mombamomba anao ao amin'ny Instagram ianao ary manana fidirana amin'ny antontam-baovao Instagram hanampy anao hanatsara ny paikadinao.
afa-tsy, azonao atao ihany koa ny manisy bokotra fifandraisana izay manamora ny fifandraisana amin'ny mpampiasa. Ny kaonty fandraharahana koa dia mihevitra fa afaka manolotra doka ianao.. Doka = mpitsidika sy varotra bebe kokoa. Tombony iray hafa ihany koa ny fanandramana beta voalohany ho an'ny fiasa vaovao.
Samy mahafantatra ny maha zava-dehibe ny tenifototra, nefa vitsy ny mampiasa azy ireny amim-pahendrena. Ny data dia mifehy ny rafitra Instagram, ary ny fomba tenifototra dia afaka mampitombo ny fitomboan'ny mpanaraka ny Instagram.
Efa naheno angamba ianao fa tenifototra iraika ambin'ny folo no tsara indrindra. Na mety ho tsy azo ampiharina ny tenifototra Instagram. Ny tanjona dia ny hisafidy tenifototra mifandraika amin'ny lahatsoratrao Instagram.
Inona koa, aza mampiasa tenifototra betsaka araka izay azo atao izay mifandraika amin'ny mpihaino kendrenao, mety hisy fiantraikany amin'ny fifamofoanao.
Ny tenifototra Instagram dia ampiasaina hamaritana ny algorithm. Manampy ny rafitra hamaritra hoe iza no tokony hahita ny hafatrao.
Diniho ny karazana lahatsoratra Instagram havoakanao sy ny mpihaino kendrenao.
afa-tsy, Diniho izay tenifototra ampiasain'ny mpihaino kendrenao ary andramo hampiditra azy ireo ao anaty atiny. Ny tenifototra misy marika dia afaka miasa raha fantatra tsara ao amin'ny niche anao ny orinasanao.
Ny ora iray ampanjifaina amin'ny paikady tenifototra dia afaka manampy anao mikendry ny mpihaino anao marimarina kokoa.
3. Mahazoa fahalalana avy amin'ireo mpifaninana aminao
Amin'ny maha-influencer azy, Mety hahasoa ny mianatra betsaka araka izay azonao atao avy amin'ireo fanao tsara indrindra ataon'ireo mpifaninana aminao ao amin'ny Instagram. Tsy te hanahaka azy ireo mibaribary ianao, fa azonao atao ny mampifanaraka ny fomba fijerin'izy ireo amin'ny lahatsoratr'izy ireo Instagram sy ny fifaneraserana eo amin'ny mpanaraka azy.
afa-tsy, raha tokony hialanao amin'ny fanaovana spam ireo kaonty ireo, azonao atao ny mampiseho azy ireo fa miahy azy ireo ianao amin'ny alalan'ny fametrahana J'aime na Comment amin'ny lahatsorany.
Iray amin'ireo lafin-javatra tsy maintsy tsaroana ny tsy fitoviana amin'ny famoahana. Ny lahatsoratra Instagram isan'andro na indroa isan'andro dia voaporofo fa mampitombo ny fampandrosoana. Tsara kokoa noho ny mandoa ny fitomboan'ny Instagram na mividy mpanaraka sandoka.
Inona koa, fantatry ny mpihaino fa manokan-tena amin'ny fandefasana votoaty lehibe tsy tapaka ianao. Lasa mpamokatra votoaty tsy maintsy ananana ho an'ny fialamboly ianao, ny entana na serivisy ampandrosoinao.
afa-tsy, Mitaky fotoana hamoronana mpanaraka Instagram mavitrika, ary tsy maintsy mifanaraka amin'ny ezaka ataonao ianao.
5. Tantara Instagram
Tantara Instagram nanomboka tamin'ny clone Snapchat Stories ary naka ny tsena ankehitriny. Amin'ny 2021, hisy tantara Instagram maherin'ny 400 tapitrisa alaina isan'andro, miaraka amina orinasa maherin'ny 2 tapitrisa mampiasa Instagram Stories.
afa-tsy, Ny fampiasam-bola amin'ny tantara Instagram mora vitsivitsy isan'andro dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny firotsahan'ny mpihaino anao.
Ny mombamomba anao Instagram dia ho tranokala faharoa ho an'ny orinasanao. Amin'ny toe-javatra sasany, mety afaka manao mihoatra noho ny pejy web static. Izy io dia manangana fahatokisana amin'ny marika, porofo ara-tsosialy sy fifaneraserana marina amin'ny vinavinao sy ny mpanjifanao. Ny marketing amin'ny fitomboana Instagram no fitaovana fandraharahana farany amin'ny 2021, ary ireo orinasa hendry indrindra dia hanararaotra feno.
Lahatsoratra teo alohaAhoana ny fomba hahazoana mpanaraka bebe kokoa amin'ny Instagram Cheat Sheet : #Torolalana n ° 1
Lahatsoratra manarakaAhoana ny fomba hahazoana vola amin'ny Instagram tsy misy mpanaraka 2021 : Fomba 9 hanaovana